Vondron’ny mpahay toekarena (Crem)*: « Aoka izay ny kobaka am-bava sy ny fampanantenana poakaty » | NewsMada
Vondron’ny mpahay toekarena (Crem)*: « Aoka izay ny kobaka am-bava sy ny fampanantenana poakaty »
Nanao fikaonan-doha ny Faribolana mpandinika ny fihariana eto Madagasikara (Crem), na ny vondron’ny mpahay toekarena, manolotra volavolan-kevitra momba ny fampandrosoana ho an’ireo kandida tsy ankanavaka 36. « Tsy manohana kandida tokana izahay fa vonona kosa hisokatra amin’ny rehetra izay vonona hiara-kiasa aminay, na iza na iza », hoy ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Crem, Ratobisaona Rado. « Aoka izay ny kobaka am-bava sy ny fampanantenana poakaty », hoy ry zareo mpikambana ao amin’ny Crem.
Raha ny fanazavan’ireo mpahay toekarena ireo, tsy misakana ny tetikasan’ny kandida isanisany akory ny nataon’izy ireo fa vao mainka hanampy azy ireo. Hojerena amin’izany fiaraha-miasa izany, raha misy ny fahatokisan’izay kandida ho lany filoham-pirenena eo, ny laminasa azo tanterahina sy ny tsy azo tanterahina, na mbola sarotra ho antsika ny manatanteraka azy.
Mandrafitra vinavina maro ny Crem momba ny vola, ny indostria, ny harena an-kibon’ny tany, ny fambolena sy ny fiompiana, ny jono, ny faritra ara-toekarena manokana (Zes)*. Tsy hijanona fotsiny amin’ny filazana tetikasa izy ireo fa mijery indrindra izay fomba hahazoana manatanteraka izany. « Tsy vao sambany amin’ny fampielezan-kevitra ny fampanantenana ataon’ireo kandida, saingy aiza ny laharana misy an’i Madagasikara izao eo amin’ny fampandrosoana ? », hoy ny mpikambana iray ao amin’ny Crem.
Fikambanana iray fampivondronan-kevitr’ireo mpahay toekarena ny Crem, ary manolotra izany any amin’ny politikam-panjakana, ho an’izay mpitondra. Tsy mijery izay tolo-kevitra izay ireo mpanao politika tonga eo amin’ny fitondrana fa mihambo mahavita irery ny fampandrosoana, nefa ny kolikoly sy ny fitiavan-tena no manjaka. Vonona hatrany ity fikambanana ity, indrindra amin’izao vanim-potoana diavintsika izao, hampifandray ny fahalalana sy ny fahefana.